Ungasisika njani iintyatyambo ephepheni ngezandla zakho? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokusika iintyatyambo ngaphandle kwephepha ngezandla zakho?
Ndikucebisa ngamandla ukuba wazise umntwana kweyona ndlela inomdla kakhulu yeKirigami. Ngombulelo kuyo, unokufumana amanani aqokelelayo, ungabathanda nje, kwaye unokusetyenziswa njengesiseko seeposikhadi ezizayo. Mna ngokobuqu ndingavuya kakhulu ukufumana ikhadi elinje ngoMatshi 8. Kwaye akukho nto uyifunayo: iphepha, isikere, itemplate okanye umbono wakho. Itemplate inokuba ngolu hlobo:
Umgca oqinileyo yile nto uyifunayo ukusika ngesikere, umgca enamachaphaza kukubethelela iphepha ngaphaya, amachaphaza kukuphoswa ngaphakathi.
Nazi ezinye zeembono ezipholileyo:
Nantsi indlela yokusonga iphepha ukufumana intyatyambo kwangoko (kuhle, okanye enye yeenkcukacha zentyatyambo):
Olona lula luya kuba kukusika ecaleni komda wetemplate yeentyatyambo esele igqityiwe.
Okwesibini ekuntsokotheni kuya kuba kukusikwa kwenguqulo efanayo egqityiweyo yentyatyambo, kodwa kusetyenziswa isitshetshe sokucacisa ukwahlula ngobunono iindawo ezingaphakathi zomfanekiso.
Into enomdla kakhulu iya kuba yindlela yokusika iintyatyambo ngephepha lokuqala lokugoqa. Oko kukuthi, ubuchule bokubeka intyatyambo buya kufana nobuchule bokuqweba ikhephu.
Kwakhona, intyatyambo enevolumu eninzi inokufumaneka ngaphandle kokusikwa ngokubhalwa ngokuchanekileyo kwephepha.
Intyatyambo engatyibiliki inokufumaneka ngokusika okubanzi kunye nokujija.
Ukongeza, intyatyambo ebuntsundu inokufumaneka ngokusonga iphepha elifanayo. Kuphela ngoku, ngaphambi koko, kuyimfuneko ukusika uthotho lwamacangci. Kuxhomekeka kwindlela yokusika, ufumana imibala eyahlukeneyo.
Unokuzama ukwenza u-carnation ephepheni kunye nomntwana wakho. Sithatha iphepha elinemibala yawo nawuphi na umbala ocinga ukuba ulungele intyatyambo ye-carnation. Sika izangqa ezithathu kuyo. Ezi ziya kuba zizinto zethu ezifuyiweyo.
Songa izangqa kabini kwisiqingatha.
Hlanganisa ezi petals zithathu kunye.
Ubumnandi obunjalo bunokuhombisa nayiphi na ikhadi lemibuliso ukusuka ngoFebruwari 23 okanye uSuku lokunqoba.
Ungasebenzisa istayile okanye itemplate ukuzoba intyatyambo entle. Kodwa ukusika akunzima. Kuya kuba lula ngomntwana ukujikeleza istena kunokuba azidwebe ngokwakhe intyatyambo entle. Unokwenza isicelo kunye nomntwana wakho ngokusika zonke iinxalenye zeentyatyambo kwiphepha elinemibala kwaye uzinamathisele kwikhadibhodi. Ukuba umntwana akakulungelanga ukusika, iinkcukacha ezincinci (umzekelo, isitali, istamens) kungcono ukugqiba okanye ukushiya ngokupheleleyo kunokuhlukumeza ukusika kwabo.
Nazi ezinye iipatheni zombala wokusika:
Unokusika imitya kwiphepha elinombala kwaye uwanamathele ngohlobo lweeseli, njengakule foto.
Kulula kakhulu ukwenza iintyatyambo ephepheni kunye nomntwana, ngesikere esaneleyo ezibukhali, neengcebiso ezijikeleziweyo kunye naliphi na iphepha lephepha. Ukuze amagqabi eentyatyambo yethu afane, kufuneka uligobe amagqabi ngesiqingatha emva koko uwasike. Nokuba ikho enye inketho - sebenzisa itemplate egqityiweyo okanye wenze isitampu okanye uprinte iphepha uze ulisike. Iintyatyambo ezinjalo zilungele ukuhlobisa iiposikhadi.
Ukuba ufuna ukwenza ilungiselelo leentyatyambo, emva koko uncamathisele istora kwintyatyambo, ungasenza ukusuka kwiskewer, izinyo leentsimbi, ucingo. Isiqu siqhotyoshelwe kwintyatyambo kusetyenziswa umpu oshushu okanye iplasitine.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokusika iintyatyambo ephepheni. Unokusika intyatyambo nganye nganye ngephepha okanye wenze amacangci kwaye uyikhuhluze kunye.
Unokusika iintyatyambo ephepheni kunye nomntwana wakho. Lo ngumsebenzi onomdla kwaye wokufundisa ukuphucula izakhono kuya kuba luncedo. Kuxhomekeka ekubeni mdala kangakanani umntwana, ubugcisa beentyatyambo zamaphepha bunokuba ngaphezulu okanye bungaphantsi kobunzima.
Intyatyambo esikiweyo ingasetyenziselwa isixhobo sokwenza izixhobo, ukwenza amakhadi, ukuhombisa isipho, njl.
Ukusika iintyatyambo, unokufuna iipateni, iipensile. Kwizixhobo ozifunayo iphepha elinombala obumdaka, iglu, isikere.
Masenze intyatyambo ephepheni kunye nabantwana. Okokuqala, sisika izithuba kwiphepha kunye neefolthi, kwaye emva koko siqokelele izithuba kunye kunye kwindawo ye-inflorescence ebonakalayo.
Siziqinisa izikhala kunye neglu, ungabamba istapler. Embindini sihombisa intyatyambo egqityiweyo ngeqhosha.
Sika intyatyambo ye-rose ephepheni. Ukulungiselela i-rose enjalo, itemplate iyadingeka. Ithemplethi idluliselwa kumaphepha anemibala, inqunyulwe ngaphandle. Emva koko siqokelela kwi-Qu; budquot ;. Ukuthintela i-bud kwi-quot; engacacanga quot;, siyayilungisa ngeglue.
Onke amabakala aboniswe kwifoto kunye nodidi lwenkosi:
Inxalenye nganye yamaphepha anokuhonjiswa ngebhanti ngaphakathi. Iiroses zingasetyenziselwa ukuhlobisa ukusongelwa kwesipho.
Nazi iipateni zeroses zamaphepha:
Masenze intyatyambo entle kakhulu ephepheni.
Okokuqala, yenza izithuba zeentyatyambo. Sifumana nganye ingenanto ngokufota isikwere sephepha kangangezihlandlo ezininzi kwaye sisike umphetho, sijikeleze ngendlela yeefoliti. Sityhila iphepha kwaye sifumane oko kungenanto. Ukwenza intyatyambo enye, sibopha ngokudibeneyo izambatho ezininzi kunye nesitayile.
Iintyatyambo ezinkulu ezintle zenziwe ngephepha ukuhombisa iholide nabantwana. Ukuzenza akunzima ngezandla zakho.
Izixhobo ezilula ezineentyatyambo ezisikiweyo zingasetyenziselwa ubuciko beholide njengesipho esiya kunina, kumakhulu.
Kukho iindlela ezininzi zokusika iintyatyambo ephepheni. Nazi ezinye ezilula ezinokusetyenziselwa ubuchule bokudibana nomntwana, kwaye unokuhombisa uhlobo oluthile lweholide ngeentyatyambo ezinjalo.
Indlela e-1-zoba intyatyambo kwaye uyisike
Unokuzoba intyatyambo ephepheni (okanye usebenzise ipensile elungiselelwe kwangaphambili), intyatyambo inokupeyintwa ngumntwana kwaye inqunywe. Ukuba usebenzisa iphepha elinemibala yoku, ke ngekhe ukwazi ukupeyinta iintyatyambo. Sika izangqa ezincinci eziphuzi-embindini weentyatyambo kunye namagqabi ephepha eliluhlaza.
Indlela ye-2 - intyatyambo eyenziwe ephepheni kumgaqo-nkqubo we-Qu; ikhephu;
Ngale ndlela, kungcono ukusebenzisa iphepha elinemibala kwangoko kwaye amashiti athambileyo kulula ukuwasebenzisa. Okokuqala, sisonga igqabi ngendlela efanayo xa usika ikhephu. Kuya kufuneka uyisike ukuze zifumaneke iipalethi zeentyatyambo. Nantsi eminye imizekelo ebonisa ukuba unokusebenzisa okanye onokuza neyakho.
Ukusika iintyatyambo ephepheni kwenziwa ngokomgaqo wokusika ikhephu. Isikwere sephepha sisongelwa ngokubhaliweyo ukuze senze unxantathu. Unxantathu usongelwe ecaleni kwe-bisector. Kwaye elinye ixesha. Olu luphawu olungenanto. Umphetho wekona unqunywe ukujikeleza, uphuma intyatyambo efana ne-chamomile. Okanye iikona ezimbalwa ezibukhali. Kuvela njenge chrysanthemum. Yenza elesibini ibe incinci. Namathela ngaphezulu. Embindini, namathela isiseko sephepha lesiphelo.
Kwi-kindergarten, abantwana banikwa iikhadibhodi zekhadibhodi, abantwana babeka itemplate ephepheni elinemibala, bayijikeleze ngepensile elula bayikhuphe.
Obo buqhetseba baphuhlisa izakhono ezifanelekileyo zemoto ebantwaneni.
Abantwana abadala banokuzoba amagqabi kunye neentyatyambo ngokwazo, emva koko basike uninzi lweentyatyambo kunye neentyatyambo ngokwephethini enye kwaye bayikine okanye banamathele emfanekisweni, kuxhomekeke kwinto oyifunayo.
Apha iisampulu zeentyatyambo ezintle zokusika iphepha.
Iintyatyambo ezenziwe ngephepha - azinakuba zintle kuphela, kodwa zihlala zihlala zihlala zilungile, ngoba azizukubuna. Unokusika iintyatyambo ephepheni ngeendlela ezahlukeneyo, ndifuna ukukunikeza le ndlela ilandelayo:
-Umdinga kufuneka usike iiparali zethu ngokuzoba itemplate kwikhadibhodi ngolu hlobo:
-Nxibelelanisa ndawonye ii-petals zethu kwaye uthathe isigqibo kwiziko elinomdla:
-Ngoku sifuna isitashi, into enje:
-Khombisa isiqu sentyatyambo ngolu hlobo:
Amagqabi aqabileyo kwaye uyenzile:
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,484.